शिवलिङ्ग पुज्नेहरूलाई भजइना ‘छाडा’ लाग्यो ?
- राजेश शर्मा
‘अंग्रेजीमा छाडा बोल्दै बुद्धिजीवी महिलाहरूले पोखे आक्रोश, राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर आरोप ।’
यस्तो शीर्षक राखी बनाइएको भिडियो धेरैले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरे । यही क्रममा मलाई पनि धेरैले म्यासेञ्जरमा पठाए । यसरी पठाउनेहरू राजनीतिक दलका नेता, सांसद, कर्मचारी, पत्रकार मात्र थिएनन्, परिवर्तनको संवाहक बताउने युवानेताहरू पनि थिए ।
टिरिङ, टिरिङ, बजिरहेपछि मैले समय लिएर त्यो भिडियो हेरेँ । गएको ३० माघमा महिला अधिकारकर्मीहरूले काठमाडौंको वसन्तपुरबाट भद्रकालीसम्म गरेको मार्चपासपछि गरिएको सभामा वक्ताहरूले व्यक्त गरेका विचारलाई लिएर बनाइएको भिडियो रहेछ । त्यो भिडियोमा कतै पनि राष्ट्रपतिप्रति गम्भीर आरोप त फरक कुरा भयो, गालीसम्म पनि छैन । महिलामाथि भएको हिंसाका बारेमा महिला राष्ट्रपति किन बोल्नुहुन्न भनेर महिलाहरूले राष्ट्रपतिलाई सोधेका छन् र भनेका छन्, ‘मेरी आमा भए पनि म यही सोध्छु ।’
समाजका गन्यमान्य मात्र हाेइन, देश बनाउने जनताका प्रतिनिधि, जनताको करबाट तलब खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले समेत गलत हो भनी शेयर गरेको यो भिडियोमा भएको अर्को विषय हो- महिलाहरूले अंग्रेजीमा छाडा बोले ।
त्यो कार्यक्रमभरि आएको एक अंग्रेजी शब्द हो- ‘भजइना’ । शिव लिङ्ग पुज्नेहरूलाई भजइना ‘छाडा’ लाग्यो ? वा आफू जन्मिएको ठाउँप्रति घृणा जाग्यो ?
महिलाहरूले गरेको भाषणलाई अतिरञ्जना बनाई शेयर गर्ने मिडिया जनताको आवाजको प्रतिनिधि हुन सक्दैन नै । त्यही विभेदकारी सामग्री शेयर गरी महिलालाई गाली गर्नेहरू के आमाबिना जन्मिएका हुन् ? सामाजिक सञ्जालमा कतिले लेखेका छन, ‘महिलाका यस्तै उत्ताउला शब्द, पोशाक र व्यवहारका कारण यौनहिंसा नभए के हुन्छ ?’ अझ अगाडि बढेर लेखेका छन, ‘छोटा कपडा, टाइट कपडा, पारदर्शी लुगा भनेको पुरुषलाई आमन्त्रण गरेको हो । पुरुषले मन थाम्न नसकेर यौनहिंसा भयो । यसको कारण स्वयम् महिला हुन् । उनीहरू मस्केर नबोले को अगाडि आउँछ र ?’
यी र यस्ता सोच तपाईंभित्र रहेका विकृत, घृणित र कुण्ठा ग्रसित सोच हुन् । जुन स्वयम्‌मा अपराध हो । आफूभित्र रहेको आपराधिक मानसिकतालाई किन महिलाको पोशाक, व्यवहार र चालचलनसँग जोड्नुहुन्छ ? किनभने तपाईंँ ‘पुरुषवाद’ बोक्ने पुरुष हो । पुरुषवाद त्यस्तो चीज हो जसले आफ्नो जन्म दिने आमा, आफ्नै छोरीलाई समेत दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्छ । र, आफूमा विशेष शक्ति रहेको घमण्ड गर्छ । तर, यर्थाथमा ऊसँग केही हुन्न । जसरी महिलाहरू एकल जीवन जिउन सक्छन्, त्यसैगरी कुनै पुरुष केही वर्ष पनि एक्लै बस्न सक्छ त ? सक्दैन । हिन्दु धर्मको मूल ग्रन्थ वेदमा उल्लेख भएअनुसार संसारमा दुई प्राणी छन, ती हुन् प्रकृति र पुरुष । प्रकृतिलाई महिलाको रूपमा वेदमा व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘पुरुषबिना प्रकृति चल्छ तर प्रकृतिबिना पुरुषको जीवन निरर्थक छ ।’
हिन्दु धर्ममा मात्र हाेइन, प्राय: सबै धर्ममा महिलाको स्थान माथि छ । तर, व्यवहारमा किन दोस्रो दर्जा त ? पुरुषलाई आफूप्रति नै विश्वास छैन, महिलाबाट असुरक्षित ठान्छ र अगाडि आउन दिँदैन । र, अगाडि आउन खोजेकाहरूलाई पनि यस्तै उपमा दिएर कमजोर बनाउन खोज्छ । महिलाले गलत गरे भनी यो भिडियो बनाउने र शेयर गर्नेहरू आफ्नो जीवनसँग आफैँ डराउने, आफूलाई आफैँसँग विश्वास नहुनेहरू, यौनकुण्ठितहरू र सामाजिक विभेद बोक्ने आपराधिक मानसिकताका उपजहरू हुन् ।
जब महिलालाई पुरुषबराबरको सम्मान, संस्कार र सहभागिता दिइन्छ, तब बालविवाह हट्छ । बालविवाह नहुनु भनेको गरिबी हट्नु पनि हो । बाटो, पुल, नहरजस्ता विकासले गरिबीलाई जति घटाउँछ, त्योभन्दा दुई गुणा बढी घट्छ गरिबी जब बालविवाह घट्छ ।
सरस्वती, लक्ष्मी ,देवी, काली, भद्रकाली अनेक देवी पुज्नेहरू छोरीमाथि विभेद गर्छन् । मन्दिरमा बनाइएका मूर्ति, पोस्टर जहाँ देवी अर्धनग्न भए पनि उनीहरूलाई अश्लील लाग्दैन तर एक महिलाले मौसमअनुकूल आफ्नो शरीरलाई सुहाउने सजिलो पोशाक लगाउँदा अश्लील लाग्छ । यो कस्तो विरोधाभास हो ? पुरुषले स्याण्डो र हाफपाइन्ट लगाएर हिँड्दा केही नहुने, महिलाले त्यही हाफपाइन्ट लगाउँदा पुरुषलाई आमन्त्रण गरेको ठान्ने ? यो सरासर अपराध हो ।
डिग्री हासिल गरेर, पद, नेतृत्व लिएर, जिम्मेवारी ग्रहण गरेर मात्र मानिसमा चेतना आउने रहेनछ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो- एक महिलाले गर्मीमा पछाडि ढाड देखिने गरी कपडा लगाएर मोटरसाइकलमा बसेको फोटो पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेर महिलाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाए । र, यो प्रकारणमा ती महिलालाई गाली गर्नेहरू प्राय: समाजका ‘गन्यमान्य’ मानिसहरू नै अगाडि थिए ।
महिला अधिकारकर्मीले गरेको मार्चपास, त्यहाँ व्यक्त गरिएको विचार र मोटरसाइकलमा ‘पारदर्शी’ लुगा लगाएर पछाडि बसेकी महिलाका बारेमा गरिएको चित्रणले हाम्रो समाज कता जाँदै छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । अर्थात् यस्तै विचार बोक्नेहरू बढ्दै जाने हो भने महिलाबिनाको समाज बन्न बेर छैन । किन भने यी विचारहरू महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने मात्र हाेइन, दास बनाएर आफ्नो कुण्ठा पोख्न उद्यत छन् ।
आफैँले आफैँलाई कमजोर बनाएको, निरीह बनेको, आफ्नो व्यवहार नाङ्ग्लोजस्तो हाेइन, चाल्नोजस्तो भएको थाहा नपाउने भनेकै पुरुषवाद बोक्ने पुरुषले हो । दुई सयभन्दा बढी देश रहेको विश्वमा किन नेपाली पुरुषहरू उच्च र प्रशंसायोग्य, विश्व चलाउने स्थानमा पुग्न सकेका छैनन् त ? तपाईंको जवाफ आउला- पहिला त्यस्तो उच्च शिक्षा थिएन, अहिले राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेकाहरू बिस्तारै पुग्दै छन् ।
हो, यसमा केही सत्यता छ । तर यसभित्र अर्को पाटो छ, त्यो हो- शिक्षामा सरकारले विगतमा लगानी गर्न सकेन । किन ? पुरुषवादको चपेटाले बालविवाह बढिरह्यो । त्यही बालविवाहको सिकार गरिबी, अकालमा मृत्य, औसत आयुमा कमी मात्र भएन, बाँचेकाहरू पनि पर्याप्त पोषणको अभावमा उच्च स्टामिना, दिमागवाला हुन सकेनन् र विश्वमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेनन् । र त यस्तो उच्च संस्कार र शिक्षा दिने गीतालाई विश्वमा चिनाउन सकेनन्, वेदको प्रचार राम्रोसँग गर्न सकेनन् । अर्थात् तपाईं पुरुष आज जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, हिजो तपाईं र तपाईंअगाडिको पुस्ताले बालविवाहका बारेमा राम्ररी सोचेर महिलालाई उच्च सम्मान दिएको भए आज योभन्दा माथि तपाईं हुनुहुन्थ्यो ।
हेर्दा अहिले क्षणिक लाग्छ तर बालविवाहको असर पुस्तौँसम्म रहन्छ । अध्ययनहरूका अनुसार बालविवाह महिला र पुरुषबीच समानता नभएका देशहरूमा बढी छ । जब महिलालाई पुरुषबराबरको सम्मान, संस्कार र सहभागिता दिइन्छ, तब बालविवाह हट्छ । बालविवाह नहुनु भनेको गरिबी हट्नु पनि हो । बाटो, पुल, नहरजस्ता विकासले गरिबीलाई जति घटाउँछ, त्योभन्दा दुई गुणा बढी घट्छ गरिबी जब बालविवाह घट्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १ लाख, १५ हजार १ सय ५० जना बालिकाको १० वर्ष नपुग्दै विवाह भएको थियो । यस्तै, ११ लाख १ हजार २ सय २३ बालिकाको १० देखि १४ वर्षको उमेरमा विवाह भएको थियो । यस्तै, ४३ लाख ४० हजार ४ सय ९७ बालिकाको १५ वर्षदेखि १९ वर्षको बीचमा विवाह भएको सो जनगणनाले देखाएको छ । अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने २०७८ सालमा हुने जनगणनाले प्रस्ट पार्नेछ । तर, विगतको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । अझ परिवारले छोरा जान्ने प्रवृति त झन् डरलाग्दो छ । भिडियो एक्सरे हेरी छोरी भए गर्भपतन गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ ।
सरकारले बालिका र किशोरीमा पर्याप्त लगानी गर्ने, विभेद हटाउने हो भने समानता आउन समय लाग्दैन । बालिकाको सशक्तीकरणमा भएका सफल अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै विभेदको खाडल अन्त्य गर्न सरकारले बालिकामा लगानी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । बालिकामा गरिएको लगानीले विभेद मात्र हट्दैन, देशको गरिबी र हिंसा पनि हट्छ ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल र क्यानलन नामक संस्थाले प्रकाशन गरेको 'नेपालमा बालिकाको स्थिति' प्रतिवेदनअनुसार बालक र बालिकाको अनुपात १०० बालिका र ११४ बालक रहेको छ । अर्थात् एक सय बालिकाको जन्म हुँदा १ सय १४ बालकको जन्म हुन्छ । विश्व स्वाथ्य संगठनका अनुसार यो अनुपात १ सय ५ सम्मको जन्मान्तर प्राकृतिक हो । त्योभन्दा बढीको जन्मान्तर गर्भ पहिचानपछिको जन्म हो ।
अब अर्को पाटो हेरौँ महिला हिंसाको । बहुचर्चामा रहेका निर्मला पन्त, सम्झना विक र भागिरथी भट्ट प्रकरण के छोटा लुगा वा उनीहरूको पहिरनले भएको हो ? कदापि होइन । त्यो भए किन महिलाको बोली, लुगा र चालचलनसँग जोडेर हिंसा बढेको कुरा गर्छन् त ? यो त केवल पुरुषवादवालाहरूले आफ्नो रवाफ देखाउन त्यस्ता चीजको सहारा लिएका हुन् । जसको कुनै तुक छैन ।
द स्टार टाइम्सले २८ जून २०१८ मा महिलाका लागि असुरक्षित १० देशहरू जहाँ, बलात्कार, यौनहिंसा हुन्छ, त्यस्ता देशहरूको सूची प्रकाशन गरेको छ । त्यो सूचीमा भारत, अफगानिस्तान, सिरिया, सोमालिया, आउदी अरेबिया, पाकिस्तान, कंगो, यमन, नाइजेरियालगायत छन् । जहाँ महिलालाई एक्लै हिँड्नु हुन्न, छोटा लुगा लगाउनु हुन्न, शरिर पूरै छोप्ने गरी लुगा लगाउनुपर्छ भन्ने देश कसरी असुरक्षित भयो ? र, यस्तो सूचीमा महिलाको पोशाकसँग सरोकार नहुने, पुरुषले जस्तै लुगा लगाएर हिँड्न पाइने, कसैले प्रश्न नउठाउने जर्मनी, फ्रान्स, स्वीट्जरल्याण्ड, बेलायत, स्पेन, नेदरल्याण्ड, अस्ट्रेलियाजस्ता देश किन असुरक्षित भएनन् त ? के कपडा लगाइले बलात्कार, हिंसा हुने रहेछ ? त्यो हुँदो हो त यी युरोपका देशमा बढी बलात्कार, यौन हिंसा हुनुपर्ने होइन ? पूरै शरीर ढाकेर हिँड्नुपर्ने, महिला एक्लै बाहिर जान नपाइने गल्फ देशहरूमा बलात्कार, यौन हिंसा किन बढी भयो ?
के अंग्रेजी शब्दहरू बोल्ने ठाउँका महिलामा बलात्कार बढी हुदोंरहेछ त ? किन नेपाली महिलाले अंग्रेजी शब्दमा प्रश्न गरे भनेर आलोचना गर्ने ? राजनीतिक रूपमा महिलामा चेतना आएको छ । त्यसैको परिणाम हो- महिलाको मार्चपास र त्यहाँ व्यक्त गरिएका विचारहरू । ग्लोबल इकोनाेमी फोरमले हरेक वर्ष विश्वका देशहरूको जेण्डर ग्याप प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । कोभिडको कारण हुन सक्छ सन् २०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल जेण्डर ग्यापमा कमजोर हुँदै गएको छ । विश्वभरका महिलाहरूको जेण्डर ग्यापको मापन चार आधारमा ग्लोबल इकोनाेमी फोरमले प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ । पहिलो, महिलाको आर्थिक सहभागिता र अवसर दोस्रो महिलाको शिक्षामा पहुँच तेस्रो स्वास्थ्य र जीवन चौथो महिलाको राजनीतिक चेतना रहेका छन् ।
यी चार आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल जेण्डर ग्यापको अवस्थामा सन् २००६ मा १११औँ स्थानमा थियो । सन् २०२० मा आइपुग्दा यो स्तर बढेर १०१औँ स्थानमा नेपाल उक्लिएको छ । दश स्थान माथि उक्लन सक्नु नेपालका महिलाको राजनीतिक चेतनाको स्तर बढेर मात्र हो । सन् २००६ मा राजनीतिक चेतनाको स्तरका आधारमा १०२औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२० मा ५९औँ स्थानमा उक्लिएको छ । समग्र जेण्डर ग्यापमा यो सुखद पक्ष हो । तर, अरु तीन सूचक भने निरन्तर ओरालो लाग्दो छ ।
सन् २००६ मा १००औँ स्थानमा रहेको महिलाको आर्थिक सहभागिता र अवसर सन् २०२० मा आइपुग्दा एक स्थान बढेर १०१औँ स्थानमा नेपाल पुगेको छ । अर्थात् सन् २००६ भन्दा पनि कमजोर भएको छ २०२० मा महिलाको आर्थिक सहभागिता र अवसर । त्यसैगरी, शिक्षाको अवस्था पनि कमजोर छ । सन् २००६ मा शिक्षाका आधारमा १०९औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२० मा पुग्दा १३३औँ स्थानमा पुगेको छ । अर्थात् सन २००६ भन्दा पनि कमजोर छ महिलाको शिक्षामा पहुँच ।
यहाँ महिलाले अधिकार चाहियो भन्नु त परको कुरा, महिलामाथि भएको हिंसालाई रोक, पीडकलाई कारबाही गर भनेर महिला सडकमा आउने कुरालाई समेत सामान्य मानिँदैन, किन ? असामान्य मान्नेहरू शिक्षित, पद र प्रतिष्ठा भएकाहरू नै हुनु दु:खद पक्ष हो । त्यसैको प्रतिबिम्बको रूपमा महिलाको मार्चपास र त्यहाँ व्यक्त विचारको विरोध गरिएको हो ।
यस्तै, स्वास्थ्य र जीवनमा पनि सन् २००६ मा १११औँ स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२० मा आइपुग्दा १३१औँ स्थानमा पुगेको छ । अर्थात् स्वास्थ्यमा महिलाको पहुँच पनि कमजोर बनिरहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सयुक्त राष्ट्रसंघले मात्र होइन, नेपाल सरकारले पनि यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने गरेको छ । हाेइन भने समग्रमा दश स्थान माथि उक्लिएको जेण्डर ग्यापलाई आधार मानेर प्रगति भएको भनी किन उल्लेख गर्दथ्यो र ? तर, तीनवटा महत्त्वपूर्ण सूचक कमजोर भएको कुरा सरकारले मौन बसेर स्वीकार गरेको छ । जसरी सरकारले महिलाको जीवनस्तर विकासका यी महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई नजरअन्दाज गरिहेको छ, त्यसैगरी समाजले महिलामाथिको विभेदलाई पनि बढाइरहेको छ ।
सरकारले लिने नीति, योजना र कार्यक्रमहरूले नै महिला र पुरुषबीचको विभेदको खाडल कम हुँदै जाने हो र समाज पनि त्यही दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने हो । सरकारले बालिका र किशोरीमा पर्याप्त लगानी गर्ने, विभेद हटाउने हो भने समानता आउन समय लाग्दैन । बालिकाको सशक्तीकरणमा भएका सफल अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै विभेदको खाडल अन्त्य गर्न सरकारले बालिकामा लगानी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । बालिकामा गरिएको लगानीले विभेद मात्र हट्दैन, देशको गरिबी र हिंसा पनि हट्छ । अनि सभ्य समाज बन्नुका साथै देशको विकास पनि हुन्छ ।
तर यहाँ महिलाले अधिकार चाहियो भन्नु त परको कुरा, महिलामाथि भएको हिंसालाई रोक, पीडकलाई कारबाही गर भनेर महिला सडकमा आउने कुरालाई समेत सामान्य मानिँदैन, किन ? असामान्य मान्नेहरू शिक्षित, पद र प्रतिष्ठा भएकाहरू नै हुनु दु:खद पक्ष हो । त्यसैको प्रतिबिम्बको रूपमा महिलाको मार्चपास र त्यहाँ व्यक्त विचारको विरोध गरिएको हो । यसरी विरोध गर्नेहरूले एक पटक राम्ररी सोचून्- के उनीहरू महिलाबिना जन्मिएका हुन् या उनीहरूको जीवन महिलाबिना चल्न सम्भव छ ? जब आफ्नो जीवन महिलाबिना चल्दैन भने किन विभेद गर्ने ?
प्रकाशित मिति: आईतबार, फागुन ९, २०७७, १८:५४:००
राजेश शर्मा p
'२५ वर्षदेखि झुपडीमा बसिरहेका छाैँ, अझै २५ वर्ष चौरीमा बसेर आन्दाेलन गर्न तयार छाैँ' '२५ वर्षदेखि झुपडीमा बसिरहेका छाैँ, अझै २५ वर्ष चौरीमा बसेर आन्दाेलन गर्न तयार छाैँ' 8 min read
नेकपाका कारण संसदीय व्यवस्था धरापमा : एनपी साउद2min read
निर्मला हत्या अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्षतिर प्रहरी, एआईजीद्वय पोखरेल र शाहीले गरे अनुसन्धान अधिकृतसँग छलफल5min read